အဆိုပါ အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံ၏လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ(ပါရှန်း: نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران‎)တွင် တပ်မတော်(Artesh)၊ တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်(Sepāh) နှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအင်အား(ရဲ)တို့ပါဝင်သည်။
ယင်းအင်အားစု ၅၂၃၀၀၀ သည် တက်ကြွလှုပ်ရှားလျက် ရှိသော အင်အားစုဖြစ်ပြီး ထိုအတွင်း၌ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအင်အားစုမပါဝင်သေးပါ ။ အားလုံးသော လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတို့သည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး၏ညွှန်ကြားချက်အောက်တွင်ရှိပေသည်။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာနသည် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ဘဏ္ဍာရေးတို့တွင် တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်သည်။ ယင်းဌာနတို့သည် စစ်မြေပြင်ဂဏ္ဍနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
၁၉၈၀ခုနှစ်မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော အီရတ်ဘက်မှ စတင်ကျူးကျော်ခဲ့သည် စစ်ပွဲဖြင့် အီရန်တော်လှန်ရေးကို အံ့ဩသွားစေခဲ့ကြသည်။ ထိုစစ်ပွဲ၌ အကြိမ်ကြိမ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်လည်းထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ရသည်။၁၉၈၇ ခုနှစ်မှစ၍ အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်မှ အီရန်၏သတ္ထုရှာဖွေရေးရေယာန်များကို ပါးရှန်းပင်လယ်ကွေ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေလမ်းကြောင်းပိတ်၍ စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ကာ ရပ်တန့်စေခဲ့သည်။ ထိုစစ်ဆင်ရေးသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်အထိ ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ဧပြီလ၁၈ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် အီရန်သတ္ထုရှာဖွေသော ရေယာဉ်ဖြစ်သော USS.B အားလက်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်း၌ အီရန်တပ်မတော်သည် အမေရိကန်၏ လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုပိတ်ဆို့ထားသည့်အတွက် အမေရိကန်ထုတ် လက်နက်များကို မိမိတို့၏ စစ်ဆင်ရေးများ၌ အသုံးပြုရန်အတွက် ပြည်ပ၏အကူအညီမပါဝင်ပဲ စုစောင်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ အီရန်သည် ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်မှ ဝယ်ယူထားသော လက်နက်များနည်းတူ မိမိကိုယ်ပိုင်လက်နက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုကာလအတွင်း ကြိုးပမ်းမှုများသည် ထိုကာလ၏နောက်ဆုံးအချိန်အထိ အီရန်ကို အသိနည်းခဲ့ပေမဲ့ အီရန်သည် အမေရိကန်လက်နက်များကို မြောက်များစွာပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ အီရန်သည် မိမိတို့၏တပ်မတော်အတွက် လက်နက်အပိုပစ္စည်းများနှင့် အမေရိကန်လက်များကို တန်ပြန်စစ်ဆင်ရေးပြုချိန်များတွင် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုလက်နက်များကို ပထမပိုင်း၌ အစ္စရေးမှ တင်ပို့ပေးသလို နောက်ပိုင်း၌ အမေရိကန်မှ တိုက်ရိုက်လာခဲ့သည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် အီရန်အစိုးရသည် အီရန်နှင့်အီရတ်စစ်ပွဲတွင် ပျက်စီးဆွေးမြေ့သွားသော လက်နက်များကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းတစ်ရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့လေသည်။ အီရန်သည်၁၉၈၉ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်အကြားတွင် လက်နက်ခဲယမ်းများအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံကိုသုံးစွဲခဲ့သည်။ အီရန်သည် အခြားသင်္ဘောများ မိမိတို့ရေပိုင်နက်တွင်းသို့ဝင်ရောက်မှုများကို တားဆီးနိုင်သော လက်နက်ကို ထုတ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက် အစိုးရမှ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုအတွင်း၌ အီရန်မရိန်းရေတပ်များနှင့် ရုရှားထုတ် တိုက်လေယာဉ်များပါဝင်သည်။ ထိုလေယာဉ်များသည် လက်နက်ခဲယမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်လေး လေယာဉ်များကို တိုက်ခိုက်နိုင်သည်။
၁၉၇၉ ခုနှစ်မှစ၍ မည်သည့်ပြည်ပ စစ်အခြေစိုက်စခန်းမျှမရှိတော့ပေ။ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပိုဒ်၁၄၆ တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်မှာ မည်သည့်ပြည်ပနိုင်ငံများမှ စစ်အခြေစိုက်စခန်းချခြင်း မရှိစေရ။ မည်မျှပင် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါစေ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ စစ်စခန်းချခြင်းကို တားမြစ်ထားလေသည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် အီရန်ကွဒ်တပ်ဖွဲဝင်များသည် စီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်း သူပုန်များကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် ဘရှားအစဒ် အစိုးရအား စစ်ဆင်မှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်စီစဉ်ပေး၍ ထောက်လှမ်းမှုများပြုလုပ်လျက် ရှိသည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ဆန့်ကျင်သူများအား အင်တာနက်နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများကို အသုံးပြုကို အလေးပေးထိန်းချုပ်ရန်နှင့် အထူးသဖြင့် မက်စဂျ် များကို ထိန်းချုပ်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ .
နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အီရန်အထူးတပ်ဖွဲ့များသည်ရုရှားလေယာဉ်မှူးတစ်ဦးအားဆီးရီးယားကျော်လွန်၍ တူရကီနယ်တွင်းသို့ရောက်သွားခဲ့မှုကြောင့် တူရကီမှပစ်ချခဲ့သည်ကို ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ လက်ဘနွန်မှ ဟဇ်ဘွလ္လာဟ် အမျိုးသားတပ်များနှင့် ဆီးရီးယားမှ တပ်မတော်အား အီရန်၏လမ်းညွှန်မှုအောက်၌ အီရန်စစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတို့၏လက်အောက်တွင်အထူးစစ်သင်တန်းပေးမှုကိုခံယူလျက် ရှိသည်။၎င်းအပြင် ဆီးရီးယားတပ်များသည် စစ်မြေပြင်နှင့်ရင်နှီး ကျွမ်းဝင်သူများဖြစ်ပေသည်။ အပြင်ဤအချက်ကိုကနေဆီးရီးယားစစ်သားမြေပြင်အနေအထားနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြသည်။ မြေပြင်စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့သလို ရုရှားလေယာဉ်သည်လည်း လေကိုထိန်းချုပ်၍ ဂြိုဟ်ထုအား အဆက်အသွယ်ရယူခဲ့သည်။ ဂြိုဟ်တုအကူအညီဖြင့်ဂျီပီအစ်လမ်းကြောင်းရှာတွေ့ခဲ့သည့်အခါ ရုရှားလေယာဉ်မှူး၏အခြေအနေကိုသိခဲ့ရသည်မှာ ၎င်းသည် စီးရီးယားရှေ့တန်းရှိတပ်ဖွဲ့၏ အနောက်ဘက် ၆ ကီလိုမီတာအကွာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တပ်ဖွဲ့တို့အကြားတွင် ရှိနေခဲ့ကြောင်းသိခဲ့ရသည်။ ထိုအခါ စစ်ရေးတက်ကြွသောသူများနှင့် အထူးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး စစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ ထိုစစ်ဆင်ရေးတွင် ရုရှားလေယာဉ်မှူးကိုကယ်တင်နိုင်ရုံသာမက ခေတ်မှီလက်နက်ကြီးများဖြင့် သောင်းကျန်းလျက် ရှိသော လူသတ်သမားများကိုလည်း အမြစ်ဖြတ်သုတ်သင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအထူးတပ်ဖွဲ့ တွင်းရှိ စစ်သည်၂၄ ဦးစလုံး မကျခဲ့သလို သေးငယ်သော ဒဏ်ရာပင်မရရှိခဲ့ပဲ မိမိတို့စစ်စခန်းသို့ပြန်ခဲ့သည်။.
အာယသွလ္လာဟ် အလီခါမေနာအီ (အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်( ပါရှန်း: فرمانده کل قوا‎)
ဗိုလ်ချုပ်- မိုဟမ္မဒ် ဘာကေရီ (سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری) (စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် , ( ပါရှန်း: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‎)
ဗိုလ်ချုပ်- အသာအွလ္လာဟ် ဆွာလေဟီး (امیر سرلشکر عطاءالله صالحی) (စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်, ( ပါရှန်း: جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‎)
ဗိုလ်ချုပ် အဘ်ဒုလ်ရဟီးမ် မူစဝီ(امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی)(တပ်မတော်ဦးစီးချုပ်တပ်မှူး ( ပါရှန်း: فرمانده کل ارتش‎)
ဗိုလ်ချုပ် မိုဟမ္မဒ်အလီဂျာဖရီ (سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری)(ဦးစီးချုပ် IRGC တပ်မှူး, ( ပါရှန်း: فرمانده کل سپاه پاسداران‎)
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟိုစိုင်းန် အရှ်သရီး(سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری) (ရဲမင်းကြီး ( ပါရှန်း: فرمانده کل نیروی انتظامی‎)
အီရန်၏တောင့်တင်းသောတပ်မတော်သို့မဟုတ်အီရန်အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံတပ်မတော်အတွင်းအီရန်အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံကြည်းတပ် အီရန်အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံလေတပ်နှင့်အီရန်အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံအစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံထားရှိရေး။ ပုံမှန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များခန့်မှန်းခြေ ၃၉၈၀၀၀ရှိသည်။ စစ်မှုထမ်းနေသောအီရန်အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံကြည်းတပ်ဖွဲ့များ, ၃၅၀၀၀၀ အတွင်း၂၂၀၀၀၀သည် စစ်မှုထမ်းများဖြစ်ကြပြီးနှင့်အီရန်အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံရေတပ်သည်၁၈၀၀၀အပြင် အီရန်အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံလေတပ်အတွင်းလေတပ်သား ၃၀၀၀၀တို့ပါဝင်သည်။ အီရန်အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ သည်အီရန်အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံလေတပ် IRIAFမှပယ်ခွဲဌာနခွဲဖြစ်သည်။ .
ဘစီးဂျ်ဆိုသည်မှာ ပြည်သူတို့အကြားဖွဲ့စည်းထားသော အစိုးရတပ်မတော်နည်းတူ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး ထိုတပ်ဖွဲ့သည် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးစောင့်တပ်အောက်၌ဖြစ်သည်။ ထိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖို့ရန် ပညက်ချက်များရှိထားသည်။ အီရန်နိုင်ငံ၏ ဌာနဆိုင်ရာများမှ ဖော်ပြချက်အရ ဘစီးဂျ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၁၂.၆ သန်းရှိပြီး ၎င်းတပ်ဖွဲ့အတွင်း အမျိုးသမီးအင်အားစုလည်းပါဝင်သည်။ ယင်းအမျိုးသမီးအင်အားစုအတွင်းမှ ခန့်မှန်းချေအားဖြင့် ၃ သန်းကျော်သည် စစ်တိုက်နိုင်စွမ်းရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ ထိုအဖွဲ့အတွင်း တပ်ရင်း၂၅၀၀ ရှိသည်။၎င်းတို့အတွင်းမှအချို့သည် အချိန်ပြည့်တာဝန်ယူထားသောဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသည်။ GlobalSecurity.orgတွင်၂၀၀၅ ခုနှစ်၌ မဟာဗြူဟာနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေ့လာရေးဗဟိုဌာနချုပ်မှ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအား ရေးသားဖော်ပြထားသည်မှာ ထိုတပ်ဖွဲ့အတွင်း၌ အချိန်ပြည့် ယူနီဖေါင်းဝတ်ကာလှုပ်ရှားလျက် ရှိသော လူအင်အား ၉၀၀၀၀ခန့်နှင့် အရံအင်အားစု ၃၀၀၀၀၀ ခန့်အပြင် လိုအပ်လာသောအချိန်များ၌ စစ်အင်အားစုစောင်းနိုင်ချေ စုစုပေါင်း ၁၁ သန်းရှိသည်။ ဟုဖြစ်သည်။
အီရန်နောက်ဆုံးဘုရင် မိုဟမ္မဒ်ရေဇာရှားပဲဟ်လဝီလက်ထက်တွင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ထွန်းကားမှုမရှိပဲ များသောအားဖြင့် လက်နက်များသည် ပြည်ပမှ တင်သွင်းသောလက်နက်များဖြစ်ပေသည်။ အမေရိကန်ကုပ္ပဏီများဖြစ်ကြသော Bell, Litton နှင့် Northropတို့သည် အမြင့်တန်းအဆင့်တွင်ရှိခဲ့ကြသည်။ အီရန်နိုင်ငံလုပ်သားတို့ ဟော်လီကောပ်တာအမျိုးမျိုး၊လေယာဉ်၊ ဒုံးကြည်၊ အီလက်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တင့်ကားများကို ၎င်းတို့နှင့် အတူပူးတွဲလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ အီရန်၌ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် (IEI) အီလက်ထရောနစ် စက်မှုကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ဤကုပ္ပဏီသည် ၎င်း၏ပထမဦးဆုံးသော လုပ်ငန်းစဉ်သည် လူထုအားဖိတ်ခေါ်မှုနှင့်ပြည်ပမှ ရရှိထားသော လက်နက်များကို ပြုပြင်ခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ အီရန်ကာကွယ်ရေးစက်မှုအဖွဲ့အစည်းသည် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု၏ အကူအညီဖြင့် RPG-7၊ BM-21နှင့် SAM-7 ဒုံကြည်များကို အောင်မြင်မှု၏ပထမဦးဆုံး ခြေလှမ်းအဖြစ် ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
အီရန်အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်များသည် ယနေ့အများက အီရန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းဟု အများကသိထားသော အဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်ပြီး အထူးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ထိုအဖွဲ့၏အစီအမံများကြောင့် အီရန်သည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အလွန်ကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ အီရန်သည် ဒုံးကြည်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်တကွ မကြာမီ လက်နက်တိုက်ကြီးတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်သည်ဟု ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ယူဆခဲ့သည်။၁၉၉၂ ခုနှစ်မှစ၍တင့်ကားများ၊စစ်သည် သယ်ဆောင်သော သံချပ်ကာကားများ၊ ရေဒါစနစ်များ၊ ပဲ့ထိန်းဒုံးပျံများ၊ မရိန်းတပ်ဖွဲ့, စစ်ရေးရေယာဉ်များနှင့်တိုက်လေယာဉ်များကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်ဟု အီရန်မှကြွေးကြော်ခဲ့သည်။၎င်းအပြင် အီရန်သည် ရေငုတ်သင်္ဘောများကို ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်လျက် ရှိသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်များတွင် တရားဝင်ကြေညာခဲ့မှုများနှင့်အတူ Fajr-3 (MIRV)، Hoot، Kowsar، Fateh-110، Shahab-3လက်နက်များနှင့် မောင်းသူမဲ့ဝေဟင်ယာဉ်အမျိုးမျိုးတို့အား ခေတ်မှီစွာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအတွင်းမှ တစ်ခုသည် အစ္စရေးမှ မိမိပိုင်နက်အတွင်းပျံသန်းစေခဲ့ပြီး သတင်းအချက်အလက်ရယူရန်အသုံးပြုခဲ့သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် အီရန်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စီးသည် ၂၅ မိနစ်ကြာ အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော USS Ronald Reagan နောက်သို့သတင်းအချက်အလက်များရယူရန် ပျံသန်းခဲ့ပြီးနောက် သတင်းအချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ပဲ မိမိစခန်းသို့ချောမွန်စွာပြန်ရောက်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ၂ရက်နေ့တွင် အီရန်နိုင်ငံ၏ဗိုလ်မှူးချုပ် ဟစန်ဆိုင်ဖီမှ အစီရင်ခံခဲ့သည်မှာ အီရန်တပ်မတော်သည် မိမိကိုယ်ပိုင်လက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။၎င်းအပြင် ထိုသို့ လက်နက်များကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အီရန်သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ အစွမ်းအစတို့သည် ဤနိုင်ငံအားသိသိသာသာ တိုးတက်စေခဲ့သည် ဟု ဖြစ်သည်။ အချို့သောအနောက်နိုင်ငံများသည် မိမိတို့၏အရေးကြီးလက်နက်အသစ်အဆန်းများကို သိုဝှက်၍ သိမ်းထားကြသည်။ သို့သော် အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတ အီရန်နိုင်ငံသည် မိမိတို့၏ နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်များကို ပြသဖို့ရန်လည်း ဝန်မလေးကြောင်းနှင့် အားလုံးသောနိုင်ငံများအနေဖြင့် အီရန်၏ ဆန်းကျယ်လှသော နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်များထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိထားရမည်ဖြစ်သည် ဟု ထပ်မံ၍အစီရင်ခံခဲ့လေသည်။"
အီရန်သည် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အမြောက်အမြားကို ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ထားလေသည်။ ထိုသို့ထုတ်လုပ်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ သတင်းအချက်အလက်ရယူမှုစစ်ဆင်ရေး၌ အသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကို အီရန်မှဖမ်းဆီးသိမ်းဆည်း၍ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်သည်ဟု လိမ်လည်ပြောဆိုနေသည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှ ပြောနေသည်ဟု အီရန်မှ ဆွဲချက်တင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၆ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ၂ ရက်နေ့ တွင်အီရန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရာ၌ ၁၀ရက်အတွင်းစတင်၍ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များစမ်းသပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြသည်။ အီရန်အစိုးရသည် ဒုံးကျည်များစွာကို ထုတ်လုပ်ထားပြီး ၎င်းတို့အတွင်းမှ Shahab-2 နှင့် Shahab-3 ဒုံးခွင်းဒုံးများအပါအဝင်ပစ်ခတ်ခဲ့သည် "ရုပ်မြင်သံကြား၌ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါဒုံးပျံများသည် ၃၀၀ကီလိုမီတာမှ ၂၀၀၀ကီလိုမီတာအထိရောက်နိုင်သည်။ အီရန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် သူတို့ကိုအတွက်စပျစ်သီးပြွတ်ထိပ်ဖူးကို Shahab-3 ဒုံးခွင်းဒုံးများတွင် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ဗုံးအလုံးရေ၁၄၀၀ကို သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်မှုများကိုအမေရိကန်တို့ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်း၌ အကြိမ်ကြိမ် စစ်ရေးလေ့ကျင့်ပြီးနောက်ပိုင်း ၂၀၀၆ခုနှစ်အောက်တိုဘာ၃၀ရက်နေ့တွင် အစပြုခဲ့သည်။ ပြုလုပ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ အမေရိကန်တို့၏ အစုလိုက်သေစေသည့်လက်နက်များသယ်ဆောင်မှုကို ရပ်တန့်စေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ 
ထိုစစ်ပွဲပြီးဆုံးခဲ့သည်မှာ၂၄ နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း အီရန်နှင့် အီရတ်စစ်ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလများ၌ အီရတ်တို့ဘက်မှ အဆိပ်ငွေ့ ဓာတုလက်နက်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့မှုတို့ကြောင့် အီရန်နိုင်ငံသား၃၀၀၀၀ကျော်တို့သည် ဓာတုလက်နက်ဒဏ်ကို ယနေ့ချိန်ထိ ခံစားနေကြရသလို သေဆုံးနေကြသည်။ ထိုသို့ဓာတုအဆိပ်ငွေ့လက်နက်ဒဏ် ခံစားနေရသူများအားကုသရန် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကို အထူးတာဝန်ပေး၍ ကြပ်မတ်လျက် ရှိသည် ။ အထူးသဖြင့် မုန်ညှင်းအဆိပ်ငွေ့ဒဏ်ခံစားနေရသူများကို အထူးကြပ်မတ်စွာကုသပေးနေသည်။.
၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် အီရန်သည် ဆီးရီးယားနှင့် အီရတ် ပြည်တွင်းစစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အိုင်အစ်အိုင်အစ် များကို ချေမှုန်းရန်အတွက် ဆီးရီးယားအစိုးရနှင့် ဟိဇ်ဘွလ္လာဟ် တို့အား စစ်အသုံးစရိတ်၊စစ်လက်နက်များ၊နည်းပညာများနှင့် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကို ကူညီခဲ့သည်။
အီရန်ယခင်ခေါင်းဆောင်ရူဟွလ္လာဟ် ခိုမေနီ( Ruhollah Khomeini) သည် ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့ကို အီရန်တပ်မတော်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ထိုနေ့၌ စစ်ရေးပြလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်စေ၍ အမြဲအသင့်ရှိနေကြောင်းကို ပြသစေခဲ့လေသည်။ အီရန် တပ်မတော်သားများသည် ဧပြီလ၁၈ရက်နေ့တိုင်း အမြို့မြို့အနယ်နယ်အတွင်း၌ အမျိုးသားတပ်မတော်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် စစ်ရေးပြမှုများများကို စီကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ကြလေ့ရှိသည်။ ထိုနေ့တွင် အကြီမားဆုံးစီတန်းလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်မှုများကို (mausoleum of Ruhollah Khomeini)ရူဟွလ္လာဟ်ခိုမေနီ၏ဗိမ္မာန်ရှေ့တွင်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။.
↑ "Apponitment of Farzaf Esmaili as commander of IRIADF"၊ February 20, 2009။ 29 December 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 22 January 2016။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အီရန်အစ္စလာမ်မစ်_သမ္မတနိုင်ငံ_လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ&oldid=719570" မှ ရယူရန်
၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။